Qeerroo Ginicii : Abiyiin faarsinee jaal maroo hin balaaleefannuu,jaal golicha hin balaaleefannuu – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosQeerroo Ginicii : Abiyiin faarsinee jaal maroo hin balaaleefannuu,jaal golicha hin balaaleefannuu
Qeerroo Ginicii : Abiyiin faarsinee jaal maroo hin balaaleefannuu,jaal golicha hin balaaleefannuu!
Shining Oromo & Oromia
~Jaal Goollicha faana jirra
~Jaal Maarroo faana jiraa
~Jaal sanyii waliin jiraa
“Qeerroo Bilisummaa Oromoo”
Abiyiin faarsinee jaal maroo hin balaaleefannuu,jaal golicha hin balaaleefannuu
Godina Arsii Lixaa Bulchiinsa Magaalaa Nageellee Arsiitti Hiriirri Deeggarsa Buqaatii Fi Ajjeechaa Oromoo Wolloo, Kamisee, Raayyaa Fi Karraayyuu Haa Dhaabbatuu Jechuun Bahame.
Hiriira karaa nagaan gaggeeffame irraatti qeerroo fi qarreen jiraattoonnii fi hawaasni magaalaa fi naannawaa ishee akkasumas barattoonni fi hojjattoonni dhaaddannoo ‘’Dhiigni Oromoo Wolloo Dhiiga Keenya, Aggaammii Alagaan Oromoo Wolloo Irratti Kiyyeesse Ni Balaaleffanna’’ jechuun haala diina mataa gad qabuun gaggeeffame.
Dhumarratti hiriirri karaa nagaa fi tasgabbii qabuun ibsa ijannootiin xumurameera.
Guyyaa har’aa hospitaala #Xiqur Ambassaa deemee lola uummata keenya #Walloorrattibanameen namoota miidhaman dubbisee, jajjabeessee, waan humna koos gumaacheen deebi’e. “Gaafa isin agarru abdii horanna, haara galfanna. Dhukkubbiin keenyallee nutti salphata” naan jedhan.
Namoota lamatu Xiqur Ambassaa jira. Obbo Xahir Alishaa (lapheerra kan dha’amee) fi obbo Hayder Ahmed (qaaruu/illeerra kan dha’ame). Obbo Hayder hanga ammallee siree hin arganne. Taa’umsarra ciisa. Lamaan isaanii keessaa rasaasni hin baane. Uffata halkaniis ta’e, uffata qaama irratti uffatan kan jijjiirratan hin qaban. Haala nama baay’ee gaddisiisu keessa jiru.
Xiiqiin namummaa keenyaa gaafa akkasii mul’achuu qaba. Jara kana qofaatti hin dhiisiinaa. Yakkaa hojjetan hin qaban. Oromummaa isaaniif itti duulame. Waan dandeenyuun cinaa dhaabannee yaalaa ga’aa argatanii akka fayyaniif tumsuun dirqama seenaati. Isin wajjin jirra jedhaa!
0920834054 – Xaahir dubbisuuf
0940201372 – Hayder dubbisuuf